မိတ်ဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မိတ်ဆက်
Posted by ကျော်ဘသစ် on Nov 5, 2012 in Copy/Paste | 28 comments
(မြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာ လျှက်ဆားရောင်းတော့မယ့် လေသံမျိုးဖြစ်နေရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ကျွန်တော်က လျှက်စားရောင်းမလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိတ်ဆက်မလို့ပါ။)
ကျွန်တော် မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
ကိုယ်တိုင် ၀င်မရေးဖြစ်၊ ကွန်မန့်မပေးဖြစ်ပေမယ့် နေ့တိုင်းနီးပါး ထိုင်ဖတ်လာခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော် ရှိပါပြီ။
ဒီအထဲက လူတော်တော်များများရဲ့ စာတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေခဲ့၊
သူတို့အမြင်၊ သူတို့အတွေး၊ သူတို့ရပ်တည်ချက်တွေကို
တိတ်တိတ်လေး ဝေဖန်ဆန်းစစ်၊ သင်ကြား၊ အတုယူ လုပ်နေခဲ့တာလည်း ကြာခဲ့ပြီ။
အထူးသဖြင့်တော့ ဒီက သူကြီးလို့ အများခေါ်ကြတဲ့ ဦးခိုင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလည်း
စိတ်ထဲက လေးလေးစားစား ဖြစ်နေခဲ့မိတာလည်း ဒီဖိုရမ်ကို ပထမဆုံး လာဖတ်ဖြစ်တည်းက ဆိုပါတော့။
(ဒီဖိုရမ်မလာခင်က မိတ္တဗလဋီကာ စာအုပ်ကို ကြေညက်အောင် ဖတ်လာခဲ့ပါတယ်၊ အီကား စကားချပ်)။
ပြောလိုတာက အခု ဒီဖိုရမ်မှာ ကျွန်တော် သိသလောက်၊ တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက်၊
ဖတ်ဖူးသလောက်နဲ့ စာတိုပေစလေးများ ၀င်ရေးတော့မလို့ပါ။
ဒီဖိုရမ်ကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ကလောင်လေးများ တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ဖြစ်လာလေမလား ကြိုးစားကြည်မလို့ပါ။
မန္တလေးဂေဇက်ဟာ အတွေးအခေါ် ပွင့်လင်းပြီး၊ အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့
အကဲခတ်ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် ဒီဖိုရမ်မှာ လာ စာရေးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရွာမှာ မမ်ဘာဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုလည်း ရွာသားတစ်ယောက်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုကြပါ။
တိုကျော်ထင်နော် ဂို ..
ကြိုဆိုပါလယ် ခည ..
ကျုပ်တို့ မန်းဂဇက် ရွာကြီးကို ခညားက အကဲခတ်နေဒါ တစ်နှစ်လောက်တောင် ကြာပီဆိုဒေါ့ ..
ဘာမှ ပြောစရာ ရှိဒေါ့ဘာဘူး ခည ..
ကျုပ်ဂဒေါ့ ဒီရွာကြီးထဲကို ရံဖန်ရံခါ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ရံတစ်ခါ လာရောက် လည်ပတ်ပီး ပေါက်တတ်ကရ လေပေါဒတ်ဒဲ့ လူတစ်ယောက် ဖစ်ဂျောင်းလည်း ပြန်လည် မိတ်ဆက် ဘာရစေ ခညာ …
ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော့်ကို အခုလို ကြိုဆိုဖော်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. မစ္စတာအံ။
ဒါနဲ့ မစ္စတာအံ, sorry, if it’s not really formal, Mr. Vomit,
ဒီမှာ ပို့စ်တင်ပြီးရင် edit လုပ်လို့ ရသေးလားခင်ဗျ?
ပြီးရင် စာတစ်ပုဒ်ကို စာလုံး ၁၅၀၀ တင်လို့ ရတယ် မဟုတ်လား?
စာမူရေးတဲ့ ဘောက်ဇ်အောက်က Word Count မှာ စလုံး အတိအကျပြလား မပြလား ကျွန်တော် သံသယံဖြစ်နေလို့။
ကျေးဇူးနော် မစ္စတာ ဗောမစ်တ်
Dမှာက မန်ဘာ အသစ်တွေ အနေနဲ့
ပို့စ်တင်ပြီးရင် အက်ဒစ် လုပ်လို့ မရသေးပါဘူး ခင်ဗျ ..
အချိန် ကြာလာမှသာ အက်ဒစ် လုပ်ခွင့် ရလာတာပါ ..
ဒါကို ဒီရွာရဲ့ အဆိုအရ ပြောရရင်တော့ ရာထူး တိုးတယ် ပေါ့ဗျာ ..
ဒါကလည်း ဦးခိုင် ဆိုတဲ့ ကျုပ် ယောက်ခထီးကြီးရဲ့ အရာပါ ..
သူကြီးက မန်ဘာ အဆင့်ကို တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ပို့စ်ကို Edit လုပ်ခွင့် ရလာပါလိမ့်မယ် ကိုကျော်ထင်နော် ခင်ဗျာ ….
(ဒါကတော့ ကျနော် သိသလောက် ပြောတာပါ ခင်ဗျ)
ဒီမယ် … မောင်မောင်အံ သွားချီးကို ယောက္ခထီးလို့ခေါ်ရင် ကျုပ်ကို မာမီလို့ခေါ်နဲ့ … ဒါပဲ ..
စိတ်ဆိုးဒေါ် မူဘာနဲ့ ..
သဂျီးဂို ယောက်ကထီးလို့ ခေါ်ဒေါ့ဘူးနော် ..
မာမီ ကိုပဲ မာမီ လို့ ခေါ်ဒေါ့မယ်နော် …
အော်ပင် ဆော်မယ့်သူတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် ။
တားတားတို့ က.. ၀မ်းမျောက်ဝမ်းတာ..ကျိုစိုဘာဒယ်…
လမ်းမှာတွေ့ ရင်လည်း..အုတ်ခဲကြိုးနဲ့ ကောက်မထုပါနဲ့ …
လက်ဖက်ရည်လေး..ဘာလေး.( ဘာလေး.ဆိုတာက ဘီယာ ကိုပြောထှာ..)
သူ ဘာမှ မရေး သေးခင် စ ထား..နောက်ထားမှ..လေ ။ တစ်ခုခု စရေးပြီ..ဆိုတာနဲ့ 
အခု..ဘာမှမရေးခင်လေး..စ ထှာပါ..နော့ ။
အော်… သဘောပေါက်ပါဘီ ခင်ဗျာ.. မစ္စတာအံ။
ကျွန်တော်က ပို့စ်မှာ ကျွန်တော့်နာမည် နှစ်ထပ်ဖြစ်နေလို့ အဲဒါ ဖျက်ပစ်ချင်လို့ပါ။
အရေးတကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ (နှစ်ထပ်ရှိတော့လည်း မှတ်မိတာပေါ့လေ)။
ကိုအလင်းဆက်ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော့်ကို ကြိုဆိုတာ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော်က ဘီယာတိုက်ချင်ပေမယ့် ငါးပါးသီလကို လူတိုင်းကို လုံခြုံစေချင်တာပါခင်ဗျာ့။
လူတိုင်းလုံခြုံရင် ကျွန်တော်ပဲ အကုန်သောက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်လေ။
ကျွန်တော်က အချစ်ကိုသာ ဝေစားမယ်၊ ပုလင်းကိုတော့ ကိုယ်ဝမှ သူများကို တိုက်ချင်တာကုလား။
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုကျော်ထင်နော် … နော် .. :hee:
word count က မမှန်ပါ ။ ပိုစ်တင်ပြီးရင် edit လုပ်ခွင့် ချက်ခြင်းမရတတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော် သိသလောက်ပြောတာပါ ။
word count မမှန်ရင် ဗမာစာ စာလုံး ၁၅၀၀ ကို ဘယ်လို တွက်ပါသလဲခင်ဗျာ။
(အရင် ဒီမှာ တစ်ယောက်ရေးဖူးတယ် ထင်တယ်၊
ကျွန်တော်က အဲတုန်းက အဖတ်သမားသက်သက်မို့ မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဘူး)။
ကျွန်တော်က စ တင်ရုံရှိသေး၊ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သလိုဖြစ်ပြီး အပြောခံရမစိုးလို့။
ကျွန်တော့်ကို ကြိုဆိုဖော်ရတာ ကျေးဇူးပါ ကထူးဆန်းခင်ဗျာ။
ေ – ၁
က – ၁
-ျ – ၁
-ာ – ၁
–်– ၁
ထ – ၁
င – ၁
န – ၁
ကျော်ထင်နော် = ၁၂
အဟိ .. အိုက်ဂလို ထင်ဒါဘဲ …
မင်္ဂလာပါ ကိုကျင်ထော် အဲလေ ကိုကျော်ထင်ရေ
လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျို့ 
(ဘယ်ချောင်တွေမှာလဲ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ဆက်ရေးတော့ဗျာ.. ဟား ဟား)
မိတ်ဆက် ဆိုတော့ မက်ဆေ့ ပေးပါ့မယ်။
မတူတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာတွေ ရဲရဲသာချရေး။ ထပ်ပြီး မတူတဲ့ အတွေးနဲ့ မန့်လာရင်လဲ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာအရ ခိုင်လုံတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဆွဲကိုင်ပြီး ရဲရဲသာ ဖင်ပိတ်ငြင်း။ ပြီးရင်တော့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပါပဲ။ ဒီလို ငြင်းခုန်ခြင်းကိုက ဒီဆိုဒ်မှာ လာဖတ်၊ လာရေး သမျှသူတွေကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေစေပြီး မတူတဲ့ အတွေး၊ အမြင်တွေနဲ့ ဗဟုသုတ တိုးစေခြင်းပါပဲ ကိုကျော်ထင် (နော်ရထာကတော့ ကျနော်နဲ့ ဆွေမျိုးနီးတယ်) ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က မှည့်ပေးလိုက်တာလားခင်ဗျာ့။
စိတ်မရှိနဲ့နော်။ ကျနော်က အတင်းကာရော မဟုတ်ဘူး။
မဖြေချင်လည်း ရတယ်…. ဟီး။
လူဆိုတာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် အသိဆုံးဆိုတော့ ကိုယ် ဘာကောင်လဲ ၊ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်လဲ ၊ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဆိုတော့ ( ငါဘာကောင်ကြီးပါလို့ ပြောနေပေမယ့်၊ တစ်ခြားသူတွေ ထင်နေပေမယ့် ကိုယ် ဘာကောင်လဲ ကိုယ်တိုင် အသိဆုံး ) ။… ဆိုတော့ကာ…(သူကြီးလေသံဖြင့်)။
နာမည်က အရေးကြီးရင် လူကောင်းလေး၊ လူလိမ္မာလေးလို့ တစ်၇ွာလုံးကို အလှူပေးရင် ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုသည့်အကြောင်း….။
ပျော်လို့ စစ ပျော်လို့နောက်နောက်
”အချစ်ကိုသာ ဝေစားမယ်၊ ပုလင်းကိုတော့ ကိုယ်ဝမှ သူများကို တိုက်ချင်တာ”
အင်း ရွာထဲတော့ ဦးဗိုက်အတွက် B.E တစ်ယောက်တော့တိုးလာပြီ ….
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် warm welcome ပါ တိုဂေါ်ဂင်ပေါ် ရေ အဲ စဂျားမပြီဖျစ်
တွားလို့ … ကိုကျော်ထင်နော်
(ဒီဖိုရမ်မလာခင်က မိတ္တဗလဋီကာ စာအုပ်ကို ကြေညက်အောင် ဖတ်လာခဲ့ပါတယ်)
ဆိုတော့ ကျမ်းကြေတယ်ပေ့ါ။ :harr:
ကြိုဆိုပြီး မကြာခင်ပဲ ပြန်ထွက်မသွားဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
(အမှန်တော့ သဂျီးရဲ့ ဒီမိုရွာကြီးက တံခါးမရှိ ဓားမရှိ ၀င်ချင်ဝင်၊ ထွက်ချင်ထွက် ခွင့်ပြုပြီးသားပါ။
ကိုယ်တိုင်ကတော့ ခုရက်ထဲ ပိုစ့်လည်း မတင်ဖြစ်၊ မန့်လည်း သိပ်မမန့်ဖြစ်လို့ ဘတ်ဂျက်ရှာခြင်းတနည်း အနေနဲ့ ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ထဲ ၀င်လိုက်တာ။)
မိုက်ဒယ်လည်း ကြောဒေး ၊၊၊၊
ခင်ဒယ်လည်း ဆိုဒေး ၊၊၊၊၊
ခညား ဒဂယ် မိုက်ရင် ကျုပ်နဲ့ ဖိုက်မလား …..
မိတ္တဗလကျမ်းကျေဒယ်ဆိုဒေါ့… ကျမ်းကျေယုံတင်မကဘူး ကျမ်းပြုနိုင်ရမယ်ကွဲ့….
ဟီး… အိမ်က ရေကဗျင်မှာ သံတစ်ချောင်းလွတ်နေလို့ ကျမ်းပြုပေးဘာလား…
အရဂါးစတာ.. welcome ပါ..
ကလောင်သွေးမယ်ဆိုတော့ တကယ်ရေးမှာပေါ့နော်… ဖတ်ရချည်သေးရဲ.ဗျာ…
ကိုကျော်ထင်နော် … ကို ကြိုဆိုပါတယ် … နောက်မှာ ရထာ တွေဘာတွေမပါဘူး ….. မင်းမျိုးမင်းနွယ်လား သိဘူး ………
နော်……….နော် ဆိုပြီး နွဲ့တဲ့တဲ့ လေးဆိုတော့….ဟင့် များတို့အုပ်စု လားဟင်…။
(ခုတစ်လောတော့ ခြေချုပ်မိနေလုိ့ ရွာတံခါးဝတောင် မနည်းသီနေရတယ်…)
လူနှင့်အကျင့်များ(၂) ကို ဖတ်ပြီးပါပြီချင့်…မမန့်ရတေးပါဝူး….
စာဖတ်ပြီးမှ လူကိုကြိုဆိုရတာ တောင်းပန်ပါတယ်ချင့်..ဟိုပို့စ်ကို အရင်ဖတ်မိလိုက်လို့ပါ…
အသိတစ်ခုရဖို့ ရာစုနှစ်များစွာ ကြာအောင် စောင့်ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေ သမိုင်းမှာ ရှိတဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာတော့ အသိတွေကို အလကားနီးပါး ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီ့အခွင့်အလမ်းတွေကို မျှော်ကိုးရင်း ကျွန်တော် ဒီဖိုရမ်မှာ လာလေ့လာပါတယ်။
စကားမစပ်…ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ ခရေဇီလို့ ယူဆပါကြောင်း…
လုံမလေးမွန်မွန် @ နှင်းကေသရာ